Gabaryahay Goobahaan Hal Tin Haku Reebin Ragu Aad Ayay U Necebyihiine | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Gabaryahay Goobahaan Hal Tin Haku Reebin Ragu Aad Ayay U Necebyihiine
Gabaryahay Goobahaan Hal Tin Haku Reebin Ragu Aad Ayay U Necebyihiine
Bulsha:- Waxaa la ogaaday in ay qeyb katahay waxyaabaha khilaafka ka dhex abuuri kara lamaanayaasha is qaba hadii aan laga taxadarin goobaha xasaasiga ah ee jirka sida in timaha laga dhameeyo goobahaan xasaasiga ah.
Timaha dumarka ka soobaxa meelaha xasaasiga ah oo kilkilaha kamid yihiin ayeeysan ragu jacelayn waxaana mararka qaar ay sababi karaan in ay kaa bixiyaan muuqal kaduwan da’da aaada saxda ah.
Waxaa kale oo ay sababi karaan in hadii jirkaagu cadyahay ay ishu qabato taasna ragu intabadan ma jecla sida lagu sheegay daraasadaha lasameeyay sidaa daraadeed iftineducation.com ayaa ku leh ka taxadar inaad nadiifiso markasta waxaana jira kareemo loogu tala galay in lagu nadiifiyo iyagoon wax saameyn ah kuu geysaneynin.
Qaar kamid ah raga majecla in haweenku lugaha timo kuleeyihiin waayo raga ayaa ku leh sidaa daraadeed afar lugood oo timo leh waxaa ka raaxo badan laba lugood oo timo leh iyo laba aan lahayn sidaa daraadeen iskuday inaad xiirto balse ninkaaga kala tashato. Digniin: Ha isku dayin inaad xiirto timaha madaxa.